Lucien Favre Ayaa Markan Shaki Galiyey Mustaqbalka Mario Gotze? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Tababaraha kooxda Borussia Dortmund Lucien Favre ayaa shaki geliyay mustaqbalka Mario Gotze isagoo qirtay inuusan ku habooneyn nidaamka haatan jira.
Xiddiga qadka dhexe ayaa xaqiijiyay bishii Abriil inuu qorsheynayay inuu ka tago BVB dhamaadka xilli ciyaareedkan xilli uu raadinayay jihada cusub ee mustaqbalkiisa, in kasta oo agaasime Hans-Joachim Watzke uu markii dambe soo jeediyay in Gotze uu go’aansan karo inuu saxiixo qandaraas cusub.
27-sano jirkan ayaa bilaabay kaliya shan kulan oo Bundesliga ah xilli ciyaareedkan wuxuuna kaliya yimid daqiiqadii 87aad kulankii isbuucii hore 4-0 ay kaga badiyeen Schalke, kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Dortmund tan iyo markii tartamada dib loo bilaabay ka dib isbuucyo ganaax ah oo la xiriirta cudurka Coronavirus.
Favre ayaa rajeynaya inuu u isticmaalo Gotze kulamada haray ee 2019-20 laakiin wuxuu qirtay qaab ciyaareedkii ku guuleystay Koobkii Adduunka ee 2014 inuusan ku habboonayn qaabkiisii ​​uu doorbiday.
“Haatan, waxaan ciyaareynaa 3-4-3,” ayuu yiri ka hor kulanka sabtida ee Wolfsburg. “Marka, waxaan lahadlayay Mario Gotze, nasiib darose tani maahan nidaamka saxda ah isaga. Waa inaad runta ka sheegtaa arintaas.
Dabcan, wuxuu awoodaa inuu ciyaaro bidix ama bidix-bidix, laakiin waan arki doonaa. Weli waxaa jira ciyaaro badan oo naga horeeya waana inaan ku tashanaa ciyaaryahan walba.
Hal ciyaartoo oo aan shaki ku jirin inuu fure u yahay loolanka horyaalnimada Dortmund waa Julian Brandt, kaasoo caawiyey laba gool qaab ciyaareed cajiib ah kulankii Schalke.
Favre ayaa soo jeediyay in xiddigii hore ee Bayer Leverkusen uu yahay tayada tayada uu Gotze u baahan yahay si uu booskiisa ugu helo.
Favre ayaa yidhi: “Julian Brandt wuxuu awoodaa inuu ka ciyaaro boosas badan oo kala duwan nidaamyo kala duwan.” Taasi waxay muujineysaa tayo aad u wanaagsan.
Ku ciyaarista 4-3-3 lama mid aha sida ciyaarista 3-4-3, ku ciyaarista baalasha ama khadadka dhexdooda. Tan si fiican ayuu u sameeyaa.
Waa inaadan ilaawin inuu khadka dhexe kula soo ciyaaray kaliya hal ama laba ciyaartoy oo dheeri ah sidoo kale wuxuu sidoo kale u ciyaaray gooldhalinta kulankii Slavia Prague. Aad ayaan u jeclahay sababtoo ah tababare ahaan waxaad helaysaa fursado badan oo aad la mid tahay ciyaartoy sidan oo kale ah. si aad u wanaagsan. Waa inuu sii wadaa horumarkiisa sida uu haatan yahay. ”
Agaasimaha Isboortiga Michael Zorc ayaa intaa ku daray “Waa ciyaaryahan fantastik ah taasina waa sababta aan ugu dadaalnay isaga oo ugu dambeyntii ugu saxiixanay BVB Ma aanan arkin ciyaartoy badan oo leh kartiisa, laakiin dabcan weli wuu sii fiicnaan karaa.”
Man Utd ayaa La xiriirtay Milan Si Ay Uga la hadasho Piatek